Xasan Sheekh “Farmaajo sidii ruuxaantii dadka yuusan ka soo dhex hadlin” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Midowga Musharixiinta xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa si weyn uga hor yimid go’aankii Dowldda Federaalka shalay ku shaaciyeen in Doorasho la gelayo oo aan loo xayirnaan doonin inta ka maqan.
Madaxweynihii hore Xasan Sheekh oo ka mida Musharixiinta ayaa sheegay in dalku halis wajahayo, haddii Doorashada shalay lagu dhawaaqay lagu socdo, wuxuuna caddeeyay inaysan wax jawaab ah ka helin dowladda arrimihii loo balansanaa ee xalka loo raadinayey, kadib shirkii Garowe.
“Midnimada dalka ayuu khatar gelinayaa go’aanka halka dhinac ee maanta dowladda ku go’aamisay in doorasho ay aadaan qeyb ka mid ah dalka, ayadoo la leeyahay qaad waa laga maarmaa ama loo joojin maayo qeybaha kale” ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
Isaga oo sii hadlaayay Musharax Madaxweyne Xasan ayaa waxaa uu yiri “Madaxweynaha sidii ruuxaantii dadka yuusan ka soo dhex hadlin ee bannaanka ha yimaado, haddii shalay doorashooyinkii ciidan iyo xoog lagu boobay, tani tii hore waa ka duwan tahay”.